Adekunle Gold, Wizkid + More New African Songs N'izu a
A ejiji na pop omenala onye edemede onye na-eche a otutu…
Another izu, mpịakọta ọzọ nke egwu ndị Afrịka dị ịtụnanya na ndị na-agụ abụ na ndị na-agụgharị n'ofe Africa. Onwa juu juputara na onyinye nke egwu Africa di egwu o na-enye anyi, kpuchie ya nke oma.
Mgbe ọtụtụ nkwa gasịrị, eze ụwa jikọrọ mba Afrobeats nke oge a, Wizkid emechaala mpụta mbụ mpụta mbụ ya album na-atụ anya Emere na Lagos. Adekunle Gold mekwara ka anyi ju ohuru ohuru izu ole na ole muchara nna.
Anyị edepụtala ndepụta ọkpụkpọ zuru oke maka gị ịnụ ụtọ izu ụka a na izu na-abịanụ ka ị na-aga n'ihu ihu igwe mmiri ozuzo nke a bụ ọrịa zuru ụwa ọnụ. Naanị nọdụ ala, zuru ike ma nwee ọ songsụ egwu ndị a dị egwu site n'aka ụfọdụ n'ime ndị omenkà kachasị ama na Africa.
Ndị a bụ egwu kachasị ụtọ n'ofe Africa n'izu a…
1. Adekunle Gold & Nailah Blackman - AG Baby
Nwaafọ Naịjirịa, onye na-ede abụ na okike, Adekunle Gold weputara egwu ohuru akpọrọ, AG Baby. Na AG Baby, Adekunle Gold gosipụtara onye na-agụ abụ na onye na-ede abụ Tunisia, Onye isi ojii Nailah. Abụ a bụ otu n'ime abụ na EP ya na-abịanụ Afro Pop vol 1. Instagram
2. Wizkid ft HER - Smile
Onye mmeri n’Africa bu Wizkid weputara egwu ohuru ya nke bu kwa ndi mbu n’iile n’aburu ndi ozo n’abia ụnyaahụ. Abụ ahụ, akpọrọ ọnụ ọchị, Ihe nturu ugo Grammy na-emeri onye n’agba egwu US / sonki HER Isi okwu abụ nke ịhụnanya na - enweghị atụ na ihe anyị na - eme ya, na - egosi Wizkid na HER ị ga - enweta ihe egwu reggae na - efe efe nke ga - ahapụ gị inye ya kpamkpam. Instagram
3. Mmetụta Mussa - Woshora
Rising onye afro-pop nke Zimbabwe na omenkà ọdịnala ọgbara ọhụrụ Mmetụta Mussa ewepụtala abụ ọma ọzọ Woshora. Ejiri video a gosipụta ịma mma omenala Zimbabwe yana ndị Zimbabwe.
4. YCEE - MIDF (Ego m hụrụ)
Gbanyiri EP ya weputara na nso nso a; Kwuru iche EP, onye ochichi Naijiria, onye ọbụ abụ na odee abụ, Oludemilade Martin Alejo, onye a maara nke ọma Ee weputara akwukwo ohuru, Midf (Ego M Ji Ahụ). The WXLA emeputa egwu bu ihe ogugu nke ya YCEE vs Zaheer album ma na-egosi apụ ya Rapper na ukwe akụkụ.
5. Cuppy ft Rema na RayVanny - Jollof On Jet
African Disc Jockey, onye na - ede ihe na onye mepụtara ihe, Ppytọ ewepụtala abụ mbụ ya nke afọ 2020 akpọrọ Jollof na Jet. Onye na-eme ihe nkiri n'ụwa niile ekwuputala nke a dị ka onye na-eduzi abụ ya na-abịa abịa album mbụ Odide mbụ. Na Jollof na Jet, Cuppy tinyere enyemaka nke Rema na omenka Tanzania RayVanny iji nyefee ezigbo iberibe Afro pop. Instagram
Tiwa Savage tinyere ya Maka geroushụnanya Dị Egwu + Ndị ọzọ Top African Songs 'Wey Dey Burst Brain'
Adekunle Gold afiri wɔ hɔ Egwu Afrịka kacha mma african songs egwu ohuru african abụ na Afrịka wizkid Ee
Onye na-ede ihe na ejiji na-ewu ewu nke na-ekiri ọtụtụ TV n'oge oge ya. Na Style Rave, anyị bu n’obi gbaa ndị na-agụ akwụkwọ anyị ume site na ịnye ọdịnaya ọdịnaya ka ọ bụghị naanị ịme ọnụ kama ka ha gwa gị ma gbaa gị ume ka ị na-ASPIRE ka ị nwekwuo nka, na-ebi ndụ karị ma nwee ahụike. Soro anyị na Instagram @StyleRave_ ♥
Collins Badewa July 18, 2020
Rema na-agwa nwa ya nwanyị ọ na - akpọkọta ya + Mgbakọ ndị ọzọ iji mee ka ị banye n’ime izu ọhụrụ